Izityalo ezidadayo zasemanzini | Ngeentlanzi
URosa Sanchez | | Izityalo ze-Aquarium
Las izityalo ezidadayoNgaphandle kokuhombisa ngaphakathi kwi-aquariums, banako bonelela ngokutya ezinye zeentlanzi kunye neminye imisebenzi yezentlanzi. Zikwabonelela ngempilo entle kwiintlanzi kuba ezi zezi inoxanduva lokutya ii-nitrate yingozi kakhulu kubemi be-aquarium. Kulula kakhulu ukuzigcina kwaye kukho iintlobo ezininzi onokukhetha kuzo.
La i-azolla okanye ifern ejikelezayo Inomdla kakhulu ekuchazweni kwayo. Umbala wesityalo uxhomekeke kwisixa osifumanayo. Ukuba i-azolla isemthunzini, ihlala iluhlaza kwaye xa ivezwe kukukhanya kwelanga okuninzi inokujika umbala obomvu. Kukulungele ukugcina i-algae kwi-aquarium njengoko ibhloka.
El IJava moss Sisityalo se-aquarium esingenangcambu esibambelela kumatye angalinganiyo nakwezinye iindawo ezimbi ngaphakathi kwe-aquarium. Ayifuni langa lide kuba zikhula ngamaqondo obushushu aphakathi kwe-16 ukuya kuma-26 degrees centigrade ukuyenza isityalo esidadayo zilungele iitanki okanye ii-aquariums ezinkulu. Zihlala zicetyiswa ngokukodwa xa usemncinci kuba zisebenza njengokhuseleko.
El ubungakanani moss Ifana kakhulu neJava moss, nangona yahlukile ngombala oluhlaza ocacileyo. Unamagqabi amancinci kunye neziqu zawo ikhula kakuhle kwindawo emnyama, ekhanyayo. Ngokungafaniyo nezityalo ezininzi ezijikelezayo ze-aquarium, le moss yeyona ilungileyo xa amanzi ene-asidi encinci kwaye inokunyamezela inqanaba le-pH ukuya kuthi ga kwi-8.
La riccia isityalo ilungile ukhetho lokuhombisa njengoko ithelekiswa kakuhle nezinye izityalo kwi-aquarium, iluhlaza oqaqambileyo. Imigca emihle yomxube we-riccia ukwenza ubunzima obukhulu obunokudada emanzini okanye obotshwe kwinto enzima kwi-aquarium, apho iya kusongelwa khona. Ukuphila kufuneka ilanga elininzi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Izityalo ze-Aquarium » Izityalo zokudada emanzini